Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu dia hivadika amin'ny PipeWire ho an'ny fitantanana audio | ubunlog
Na dia misy olona ho an'ny zava-drehetra sy mitaraina momba ny zava-misy ao amin'ny Linux ankehitriny, tsy dia "mankaleo" foana izany. Saingy ny "mankaleo" dia tsy zavatra ratsy foana; mety hidika koa hoe masaka ny zavatra. 15 taona lasa izay, ny fampiasana Ubuntu dia tsara, tena haingana tamin'ny GNOME 2.x, saingy nifanaraka toy ny saka sy alika ireo mpizara audio samihafa. Mety hitranga amin'ny horonan-tsary ihany koa ny zavatra, ary hisorohana ireo olana rehetra ireo Wayland sy PipeWire. Anisan'ny ho avy izy ireo, ary toa izany Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu hampiasa ny roa tonta manomboka amin’ity volana oktobra ity.
Amin'izao fotoana izao, amin'ny alàlan'ny default, raha tsy ampiasaina ny mpamily NVIDIA dia mampiasa Wayland ny Ubuntu sy ny fizarana hafa miaraka amin'ny tontolon'ny sary GNOME. Zava-dehibe indrindra izany raha tiantsika ny hampiasa ny fihetsiketsehan'ny tontonana fikasihana izay tena tiantsika tokoa, fa manatsara ny fampisehoana sy ny fiarovana ihany koa. Mikasika ny feo dia ny fanatsarana no iantsoana azy PipeWire ary vitsy no mampiasa azy io. Azo alefa amin'ny tanana izany amin'ny fizarana rehetra, saingy tsy ilaina amin'ny Kinetic Kudu izany.
PipeWire sy Wayland mavitrika amin'ny alàlan'ny default amin'ny Ubuntu 22.10
Ny vaovao dia nomen'i Heather Ellsworth tao amin'ny forum canonical, milaza izany hisolo ny PulseAudio izay ampiasaina ankehitriny. Ny Daily Build farany dia tokony efa nanala ny PulseAudio ary nijanona tamin'ny PipeWire, izay fikasana ho an'ny Kinetic Kudu. Ao amin'ny Jammy Jellyfish, ny dikan-teny stable farany indrindra, dia mampiasa PulseAudio, fa ny PipeWire dia napetraka ho an'izay te-hivadika. Ao amin'ny Kinetic Kudu ny voalohany dia hesorina ho an'ny farany.
Ataovy ao an-tsaina fa nisy dikan-teny LTS navoaka tamin'ny Aprily lasa teo, ary ny zavatra ho avy izao, ho an'ny dikan-teny telo, dia mety ho fiovana mahery vaika izay hanomanana ny famoahana Long Term Support amin'ny 2024. tamin'izany fotoana izany. Ho tonga amin'ny Ubuntu 22.10 20 ho an'ny Oktobra, ary ankoatry ny PipeWire, ary angamba Wayland ihany koa amin'ny alàlan'ny default amin'ny milina miaraka amin'ny mpamily NVIDIA, dia hampiasa GNOME 43 sy kernel iray izay manodidina ny Linux 5.19 ihany koa izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu dia hivadika amin'ny PipeWire ho an'ny fitantanana feo